War Deg Deg Ah: Madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan oo goordhaw shaaca ka qaaday in uu. – Xeernews24
War Deg Deg Ah: Madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan oo goordhaw shaaca ka qaaday in uu.
Madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo goordhaw Shaaca ka qaaday Asagoo ku Sudan Gudaha Madaxtooyada magaalada Baydhabo in uu ka tanaasulay in uu ka qeyb galo Doorashada Madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed.
Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa sidoo kale iska casilay xilka Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed oo xil heynteeda maalmo uga hadhsaneyd, waxa uuna si KMG ah xilka ugu wareejiyay Gudoomiyaha Baarlamaanka Koonfur Galbeed.
Warar aan helnay ayaa sheegaya in Beesha Caalamka uga digtay Shariif Xasan in uu sameeyo waqti korodhsi, waxa ayna Beesha Caalamka kula taliyeen Shariifka in uu doorashada tartamo ama isaga haro tartanka.
Shariif Xasan ayaa tanaasulka uu sameeyay loo sababeeyay in ay ka dhalatay cadaadiska beesha Caalamka iyo dowlada Federaalka Soomaaliya oo taageero balaadhan siineysa qaar kamid ah Musharaxiinta u taagan Doorashada Madaxweynaha Koonfur Galbeed.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/11/sakiin.jpg 599 501 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-11-07 16:46:582018-11-07 16:46:58War Deg Deg Ah: Madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan oo goordhaw shaaca ka qaaday in uu.
Ilhaan Cumar oo Taariikh Lama filaan ah ka soo hoysay doorashada Aqalka Congresska... Boqortooyadda Sacuudi Arabia oo gashay xaalad Halis ah iyo arrin laga cabsi...